Mpikatroka Ejipsiana Ankavia Mahinour El-Masry Noafahana Rehefa Nigadra 125 Tany Am-Ponja · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2014 11:56 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, عربي, Deutsch, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, English
Nampihantona ny didy enim-bolana hamonjana an'i El-Masry ny fitsarana iray any Alexandria, hoy ny tatitry ny Mada Masr. Tamin'ny volana Mey ilay mpikatroka no nogadraina rehefa nakarina tany amin'ny fitsarana ambony ny didy mampigadra azy, miaraka amin'ny mpikatroka valo hafa, roa taona, raha nanitsakitsaka ilay lalàna momba ny fihetsiketsehana an-dalambe izay efa nampiady hevitra, izay mandrara ny fanaovana fihetsiketsehana rehetra ao amin'ny firenena. Nosamborina i Mahinour noho ny fihetsiketseha-panoherana nataony teo an-tokotanin'ny fitsarana tamin'ny volana desambra izay nitsarana polisy roa voampanga ho namono an'i Khaled Saeed. Saeed no ilay heverina ho Mohamed Bouazizi [Tonizia] -n'ny Revolisiona ejipsiana.
Nanomboka nanao fitokonana tsy hihinan-kanina niaraka tamin'ilay Ejipsiana mpikatroka sady blaogera Alaa Abd ElFattah i Mahinour tamin'ny 25 Aogositra. Navotsotra tamin'ny 15 Septambra i Alaa Abd ElFattah, sy ireo gadra politika hafa.
Raha mbola tany am-ponja i Mahinour no nahazo ny Lokan'ny Zon'olombelona Iraisampirenena Ludovic Trarieux 2014, loka fanome isan-taona omen'ny mpisolovava amin'ny mpisolovava miaro ny zon'olombelona. Kisendrasendra, ny anjara voalohany nivoaka tamin'ny 1985 dia nomena ilay mpitarika Afrikana Tatsimo Nelson Mandela raha mbola tany am-ponja izy.
Am-pandehanana any Etazonia hanatrika ny Zaikaben'ny Firenena Mikambana any New York amin'izao fotoana izao ny filoha Ejipsiana Abdel Fattah El Sisi.